Iza i Goga avy any Magoga?
HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bengali Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cinghalais Cinyanja Danoà Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Hiri Motu Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kamba Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Letonianina Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mixe (Afovoany) Mongol Ndebele (Zimbabwe) Norvezianina Népali Oromo Ossète Otetela Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Romanianina Rosianina Runyankore Samoanina Sango Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Shona Sidama Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tchouvache Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tseky Tshiluba Turkmène Turkmène (Sirilika) Tuvalu Tzotzil Télougou Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wolaita Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany)
Iza ilay Goga avy any Magoga resahin’ny bokin’i Ezekiela?
Nohazavain’ny bokintsika nandritra ny taona maro fa anarana iantsoana an’i Satana Devoly taorian’ny nandroahana azy avy tany an-danitra ny hoe Goga avy any Magoga. Lazain’ny Apokalypsy mantsy fa izy no hitarika ny fanafihana ny vahoakan’Andriamanitra eran-tany. (Apok. 12:1-17) Nihevitra àry isika fa i Satana ihany no Goga.
Nampipoitra fanontaniana maromaro anefa izany. Nahoana? Eritrereto izao: Hoy i Jehovah tamin’i Goga, rehefa niresaka ny fotoana haharesen’i Goga: “Homeko ho sakafon’ny vorona mpihaza sy ny karazam-borona rehetra ary ny bibidia ianao.” (Ezek. 39:4) Hoy koa i Jehovah: ‘Amin’izany andro izany, dia homeko toerana any i Goga, mba hataony fasana any Israely. Any no handevenana an’i Goga sy ny vahoakany rehetra.’ (Ezek. 39:11) Anjely ve anefa dia ho azon’ny “vorona mpihaza sy ny karazam-borona rehetra ary ny bibidia” atao sakafo? Ahoana koa no handevenana an’i Satana eto an-tany? Milaza mazava ny Baiboly fa hatao ao amin’ny lavaka mangitsokitsoka mandritra ny 1 000 taona i Satana, fa tsy hohanin’ny vorona na halevina.—Apok. 20:1, 2.
Milaza ny Baiboly fa havoaka avy ao amin’ilay lavaka i Satana amin’ny faran’ny 1 000 taona, ary “hamitaka an’ireo firenena any amin’ny vazan-tany efatra, dia i Goga sy Magoga, mba hanangona azy ireo ho amin’ny ady.” (Apok. 20:8) Ahoana anefa no hamitahan’i Satana an’i Goga raha izy ihany no Goga? Tsy i Satana àry ilay “Goga” resahin’ny Ezekiela sy ny Apokalypsy.
Iza àry ilay Goga avy any Magoga? Mila jerentsika ao amin’ny Soratra Masina aloha hoe iza marina no hanafika ny vahoakan’Andriamanitra. Tsy ny fanafihan’i Goga avy any Magoga ihany no resahin’ny Baiboly fa ny fanafihan’ny “mpanjakan’ny avaratra” sy ny fanafihan’ireo “mpanjakan’ny tany” koa. (Ezek. 38:2, 10-13; Dan. 11:40, 44, 45; Apok. 17:14; 19:19) Toa tsy fanafihana samihafa ireo fa fanafihana iray ihany, saingy ny anarana iantsoana azy fotsiny no tsy mitovy. Nahoana isika no milaza an’izany? Satria milaza ny Baiboly fa ny firenena rehetra eto an-tany no handray anjara amin’ilay fanafihana farany, izay hitarika ho amin’ny Ady Hara-magedona.—Apok. 16:14, 16.
Tsy i Satana àry ilay Goga avy any Magoga, rehefa jerena ireo andininy rehetra ireo. Firenena maromaro mitambatra kosa izy io. Ny “mpanjakan’ny avaratra” ve no hitarika an’ireo firenena ireo? Tsy tena afaka milaza an’izany isika. Mety ho marina anefa izany rehefa jerena ity tenin’i Jehovah amin’i Goga ity: “Dia ho tonga avy any amin’izay misy anao ianao, eny, ho tonga avy any amin’ny farany avaratra, hiaraka amin’ny firenena maro izay mitaingin-tsoavaly daholo. Vahoaka maro be ireo, sady tafika lehibe.”—Ezek. 38:6, 15.
Niresaka momba ny mpanjakan’ny avaratra koa i Daniela, mpaminany niara-belona tamin’i Ezekiela. Hoy izy: ‘Hisy tatitra hampikorontan-tsaina azy avy any amin’ny fiposahan’ny masoandro sy avy any avaratra. Dia hivoaka amin-katezerana mafy izy mba handripaka sy handringana olona maro. Ary ny tranolainy, izay toy ny lapa, dia haoriny eo anelanelan’ny ranomasina lehibe sy ny tendrombohitra masin’ilay Tany Kanto. Hiroso ho any amin’izay hiafarany izy, ary tsy hisy hamonjy.’ (Dan. 11:44, 45) Mitovitovy amin’izay voalazan’ny Ezekiela fa hataon’i Goga izany.—Ezek. 38:8-12, 16.
Inona no ho vokatr’io fanafihana farany io? Hoy i Daniela: “Mandritra izany fotoana izany [amin’ny Hara-magedona], dia hitsangana i Mikaela [Jesosy Kristy], ilay andriana lehibe, izay mitsangana [nanomboka tamin’ny 1914] hiaro ny zanaky ny firenenao. Ary hisy fotoam-pahoriana [fahoriana lehibe] mbola tsy nisy toa azy, hatrizay nisian’ny firenena ka hatramin’izany fotoana izany. Mandritra izany fotoana izany, dia ho afa-mandositra ny firenenao, dia izay rehetra hita voasoratra ao amin’ny boky.” (Dan. 12:1) Resahin’ny Apokalypsy 19:11-21 koa io zavatra hataon’i Jesosy io.
Iza kosa ilay “Goga sy Magoga” voalazan’ny Apokalypsy 20:8? Tsy iza izany fa izay rehetra mikomy amin’i Jehovah sy manafika ny vahoakany mandritra ilay fitsapana farany amin’ny faran’ny 1 000 taona. Hankahala ny vahoakan’i Jehovah koa mantsy izy ireo, tsy misy hafa amin’i Goga avy any Magoga, izany hoe ireo firenena nanafika ny vahoakan’Andriamanitra taloha kelin’ny Hara-magedona. Hitovy ny hiafaran’izy rehetra ireo, satria samy haringana mandrakizay. (Apok. 19:20, 21; 20:9) Mety tsara àry raha antsoina hoe “Goga sy Magoga” ireo rehetra mikomy, any amin’ny faran’ny Fanjakana Arivo Taona.
Mazoto mianatra ny Tenin’Andriamanitra isika ka tsy andrintsika ny hahita hoe iza no ho lasa “mpanjakan’ny avaratra.” Na iza na iza anefa no hitarika an’ireo firenena maromaro mitambatra, dia izao no azo antoka: 1) Ho resy i Goga avy any Magoga sy ny tafiny ary ho ringana, ary 2) hamonjy ny vahoakan’Andriamanitra i Jesosy Kristy Mpanjakantsika, ary hitarika azy ireo ho ao amin’ilay tontolo vaovao hanjakan’ny fiadanana sy ny tena filaminana.—Apok. 7:14-17.